လိင်မှုဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားနိမ့်ကျခြင်းနှင့် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက် Testosterone ကုထုံး - ထိန်းချုပ်ထားသည့်လေ့လာမှု (၁၉၈၄) - Your Brain On Porn
ထိန်းချုပ်ထားသောလေ့လာမှု (1984): ယောက်ျားအတွက်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက် testosterone ကုထုံး
comments: ဤရလဒ်သည် hypogonadal ယောက်ျား testosterone ဟော်မုန်းလွှမ်းမိုးမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားကြောင့်မဟုတ်ဘဲ erectile function ကိုထံမှယခင်တွေ့ရှိချက်ကိုထောကျပံ့
br J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1984 သြဂုတ်; 145: 146-51 ။
O'Carroll R ကို, Bancroft J ကို.
Testosterone နဲ့ရလဒ်များအရအိပ်ယာဆေးထိုး၏နှစ်ဆမျက်စိကန်းသော Cross-ကျော်နှိုင်းယှဉ်ပုံမှန်လည်ပတ်သော testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူယောက်ျား၏အုပ်စုနှစ်စုအတွက်ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်, 10 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားဆုံးရှုံးမှုအဓိကအားစောဒကနှင့်အ 10 erectile ပျက်ကွက်၏အဓိကဝေဖန်ခံရ.
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားအတွက်တစ်ဦးကသိသိသာသာတိုးပထမဦးဆုံးအုပ်စု testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ အုပ်စုတစ်စုဖြစ်စေများတွင် erectile function ကိုမသက်ရောက်ရှိခဲ့သည်. ဤရလဒ်သည် hypogonadal ယောက်ျား testosterone ဟော်မုန်းလွှမ်းမိုးမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားကြောင့်မဟုတ်ဘဲ erectile function ကိုထံမှယခင်တွေ့ရှိချက်ကိုထောကျပံ့များနှင့်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းတိုးပွားလာပုံမှန်အကွာအဝေးအတွင်းပင် Pre-ကုသမှု testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်ပေါ်လာအောင်နိုင်သည်ကိုညွှန်ပြ။